ukuthengiswa okuncane kwerayisi,intengo yemishini yokugaya irayisi e-india
imishini emincane yokugaya irayisi yenzelwe ukuhlinzeka isivuno esiphezulu kanye nokwenza inzuzo ngomshini wokugaya irayisi omncane. Izisombululo zethu ezintsha zokulungisa irayisi zinciphisa ukusetshenziswa kokulahleka kwenqubo, isidingo samandla nokugcina amazinga wokuhlanzeka ekusebenzeni kokudla. Inkampani yethu inikeza ngezixazululo zephrojekthi eyenziwe ngezifiso kusuka esigabeni somqondo kuya esigabeni sokukhiqiza, ukugcina izindleko ngamazinga aphansi, nokuqinisekisa ukulethwa ngesikhathi.
Siqamba, khiqiza futhi unikeze uhla oluphelele lwemishini emincane yokugaya irayisi kufaka phakathi ukuhlanza, ukuqunjelwa, mhlophe, polishing, uhla, ukuhlunga nokufaka imishini ukufeza izidingo zokucutshungulwa kwelayisi. Inqubo yethu yokugaya irayisi encane isiza abasizi bezilayisi ukuba bathuthukise umkhiqizo futhi banciphise izindleko zokusebenza. Indawo yokukhiqiza esezingeni eliphezulu, ukudiliva okusheshayo kanye nensiza enhle yokuthengisa ngemuva kusisize saba umdlali oholayo embonini yokugaya irayisi.
lo mshini omncane wokugaya irayisi luhlobo olusha umshini wokugaya ilayisi omncane, senzelwe wonke umndeni ukudla irayisi elinempilo nelinqinisekisiwe. Impela kunjalo mncane ngomthamo ngakho-ke kulula ukusuka endaweni ethile kuya kwenye futhi iyaphatheka. Into ebaluleke kakhulu ukuthi lo mshini wokugaya irayisi ulungele amakhasimende ukuwusebenzisa ekhaya, nomsebenzi othomathikhi wokusebenzisa isheltha, ingahlangabezana nazo zonke izidingo zamakhasimende ezisetshenziswa ekhaya.Vele uyixhumanise namandla bese ucindezela inkinobho ezosebenza. Ngakho-ke uyakwazi ukubona ukuthi kulula kanjani ukuyisebenzisa. Ngaphandle kwalokho, lo mshini usebenza kakhulu.
Ungayisebenzisa ukuthola irayisi elinsundu nelayisi elimhlophe. Ngakho-ke lokhu mini yesimanje yelayisi idumile kakhulu manje, ikakhulukazi emazweni afana ne-USA, ECanada, EThailand, E-Singapore, China, I-Nigeria njll
Amathiphu Wokuphepha ukusebenzisa iMini Rice Mill
1. Amandla kagesi womshini ugesi wesigaba esisodwa. Sicela uyiqinisekise ngaphambi kokuyisebenzisa.
2. Ngaphambi kokusebenzisa umshini omncane wokugaya irayisi, sicela uhlole yonke iplagi, ukuxhumanisa ulayini kagesi.
3. Vimbela ukuvumela umshini wokugaya irayisi omncane ukuba usebenze ngaphansi kwezinga lokushisa eliphakeme, izinga lokushisa elizungeze umshini ongaphansi kwama-40 ℃ iningi.
4. I-paddy noma ilayisi elicutshungulwa umshini omncane welayisi kufanele lifike ezingeni lokuphepha futhi elinempilo. Futhi ngicela ukhethe bese uphonsa izinto ezinzima, njengetshe elincane, iron ukugwema ukulimaza umshini.
5. Ngesikhathi umshini usebenza, uma ilayisha kakhulu noma ivinjiwe, ngicela usike uhlanze izinto ezisegumbini lokugaya irayisi, bese ibuye isebenze.
6. Ngesikhathi sokusebenza, lapho i-bran ligcwele ingxenye yesibili yebhokisi le-bran, sicela uyihlanze ngesikhathi ukugwema ukuthinta umshini osebenza.
7. Uma umshini omncane wokugaya irayisi usebenza, ngicela ungayisusi.
8. Ngaphambi komshini wokugaya omncane welayisi uyeke ukusebenza ngokuphelele, ngicela ungacoci bese uyigcina.
9. Ngemuva komshini wokugaya ilayisi omncane uqeda ukosa irayisi, idinga imizuzu eminingana eqhubeka nokuvumbuka, khona-ke uma luphuma lonke irayisi, khona-ke ungakwazi ukuvala umshini.
Sithinte Ngomshini omncane wokugaya irayisi